PhotoRec waa barnaamij soo kabashada file wax ku ool ah, kaas oo awood kuu inuu ka soo kabsado noocyada kala duwan file, ay ka mid yihiin multimedia, waraaqaha, archives iyo wax ka badan ka duwan oo ka mid ah storages adag (saxannada adag, CD-ROMS, USBs, kaararka xusuusta iwm). Sida iska cad, waxa ay sidoo kale soo kaban karto sawiro ka camera digital (taageeraa oo dhan camera noocyada waaweyn: Canon, Nikon, Olympus, Pentax iwm). La shaqeeyaa dhammaan hababka file waaweyn: baruurta, NTFS, HFS +, exFAT, ext2 / ext3 / ext4. Xitaa haddii si xun nidaamka file aad ku burburay ama formatted, PhotoRec weli ku caawin doona. Barnaamijku waa bilaash ah oo taageera in ka badan 440 nooc oo kala duwan file (ku dhawaad ​​270 nooc file qoysaska). PhotoRec isticmaalaa helitaanka akhriyo keliya, hubinta ammaanka ee geedi socodka soo kabashada kasta.
Sida loo isticmaalo PhotoRec?
Tallaabada 1. Marka aad shaqo bilaabin la PhotoRec, ugu horreeya oo dhan aad u baahan tahay si ay u doortaan disk aad dooneyso inaad la shaqeyso. In kastoo, inaad tan sameyso, waxaad u baahan tahay in aad hubiso in aad isticmaalayso account maamulaha.
Isticmaal falaaraha kor / hoos si ay u doortaan drive adag. Press gala in la sii wado.
Tallaabada 2. Hadda waxaad haysataa saddex doorasho uu ka soo xusho,
Riix Search aad u bilowdo nidaamka dib u soo kabashada;
Riix Options in la beddelo goobaha;
Riix File Opt inuu wax ka beddelo liiska noocyada file aad rabto in la baadhi karo, waayo,
Tallaabada 3. Options Menu.
Khayaano - files recoverable xaqiijiyey, kuwa aan waxba ka jirin - diiday;
U ogolow Qayb dhululubada ah Last - go'aamiso sida joomateri disk ah waxaa lagu qeexaa;
Ka dhig kharribeen Files - inuu wada xajiyo oo files, xitaa kuwa burburay;
Khabiirka Mode - kuu ogolaanaya in aad ku qasbi size nidaamka file block ah;
Xasuusta Low - awood / gab isticmaalka xasuus yar yahay habka haddii bidbidayaan inta ay socoto dib u soo kabashada;
PS bedeli goobaha oo keliya haddii aad tahay 100% hubin waxa aad samaynayso;
Tallaabada 4. File Opt Menu. Sahlo / Disable raadinta noocyo gaar ah file.
Tallaabada 5. Marka aad dooratay xijaab gaar ah, PhotoRec u baahan tahay warbixin ku saabsan nidaamka faylka. Haddii ay tahay ext2 / ext3 / ext4, dooran kale.
Tallaabada 6. Hadda waxaad dooran kartaa meesha aad ka raadin files ka.
Dooro Free inuu ka soo kabsado faylasha tirtiray;
Dooro oo dhan haddii nidaamka file waxaa ku kharribeen
Tallaabada 7. Hadda dooran buuga aad rabto faylasha aad soo kabsaday si la qoro warqado lagu. Isticmaal falaaraha kor / hoos for this.
PS habka kala duwan yihiin, waxayna ku xiran tahay waxa OS aad isticmaalayso.
Tallaabada 8. Sug files in dib loo soo celiyo. Files soo kabsaday laga heli karaa ka hor dhamaadka habka soo kabashada.
Tallaabada 9. Bal eeg natiijada, geedi socodka soo kabashada ka baxayo. Waxaa sidoo kale ku taliyey in iskaan faylasha kabsaday la software-adda aad, sida PhotoRec ayaa laga yaabaa in qaar ka mid ah undeleted Trojans ama faylasha kale waxyeelo.
Xiriirka iyo khilaafaadka u dhexeeya PhotoRec iyo Testdisk
Ugu horrayn, PhotoRec waa uun utility Saaxiibkiis in TestDisk ah (PhotoRec waxaa ka mid ahaa in TestDisk download folder asalka). PhotoRec iyo TestDisk Labaduba waa software free loo isticmaalo howlaha kabashada / baaritaanka / qamaar. Waxay la xogta heerka u hooseeya shaqeeyaan, hoos ku OS ah. In labada barnaamijyada jiro mouse lahayn, halkii, Up / Down / galaan badhamada waxaa loo isticmaalaa. Midkoodna ma loo baahan yahay in lagu rakibay kombuyuutar ah user si ay u shaqeeyaan, iyaga oo aad u qaadi karo oo ku haboon loogu daro on cajaladaha boot. Interface ma aha in user-friendly, laakiin, runtii, mid sahlan oo aan aad u adag. Intaa waxaa dheer, waxaa jira wax badan oo ku Hanuuniyaa online, sharxaya sida loo isticmaalo PhotoRec iyo TestDisk. Iyadoo TestDisk waxaa inta badan loogu talo galay inuu ka soo kabsado qoruhu ku kharribeen, PhotoRec takhasusay soo celinta noocyada file fara badan, ma ahan oo keliya image files, sida qaar ka mid ah u malaynayso. Labada qalab ordo ku OS ugu, ay ka mid yihiin Windows, Linux, Mac OS X, DOS, baabuur iwm
> Resource > Utility > PhotoRec Tutorial: Sida loo Isticmaalo PhotoRec